Kedu ka RapLeaf si enweta data? Kedụ ka ndị ahịa ga-esi jiri ya?
"Mara onye ahịa gị" bụ echiche a na-asọpụrụ oge maka ịga nke ọma na ụwa ahịa. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-anakọta adreesị email, mana ha enweghị data ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ka gị na ndị debanyere aha gị kwurịta okwu nke ọma. Ogologo enyere gị aka ịmụtakwu banyere ndị ahịa gị. Ha na-enye igwe mmadụ na ndụ data (afọ, okike, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ego, wdg, pịa ebe a iji hụ ihe niile) na adreesị email nke ndị ahịa US.
Worth ruru ihe e mefuru na mgbalị ahụ? Short azịza ya bụ ee. N'ọmụmụ ihe ọmụmụ kwa ụbọchị, nkewa na nhazi ahaziri rụpụtara nsonaazụ ndị a:
30% na-abawanye ma na-emeghe na pịa-site udu iji ederede isiokwu na ọdịnaya.
14% mmụba na ego sitere na onye ọrụ ọhụụ N'ime oge 30.
63% belata na ụgwọ maka ntụgharị karịrị otu njikwa.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ oge iji nweta atụmatụ atụmatụ nkwụghachi ego site na iji okike iche.
Iji Rapleaf dị mfe. Bulite ndepụta email dị ka faịlụ ederede ma ọ bụ mpempe akwụkwọ, iji nweta afọ, okike, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ego ezinụlọ, ọrụ, agụmakwụkwọ na ozi miri emi ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ha nwere ozi na pasent 70 nke adreesị email niile na-arụ ọrụ na US. Ha na-ekwe nkwa ọnụego egwuregwu karịa 90% wee ree ihe ndekọ na ọkara penny kwa ndekọ.
Iwu ọ kwadoro? Eeh. Ndị ọrụ Rapleaf nwere ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ data (na obere) data na-achịkọta data wee kee ya na adreesị email. Ha mee ka ọ sitere na naanị ụlọ ọrụ data ziri ezi ndị na-agbaso ụkpụrụ nzuzo nzuzo nke ndị ahịa - isi mmalite ndị na-enye ndị ahịa ọkwa kwesịrị ekwesị na nhọrọ gbasara ịkekọrịta ozi ha. Lee ha FAQ n'ihi na ozi ndị ọzọ.
Tonweta ozi nkeonwe dị otú ahụ na gburugburu ebe obibi na-enye ohere ka marketer na-enye ihe ndị ahịa chọrọ, ma ọ bụ zipu ozi email bara uru ma dị mkpa karịa spam na-enweghị isi. Ihe ọmụma dị otú ahụ na-emekwa ka anyị mara profaịlụ nke ndị ahịa ha na-eguzosi ike n'ihe nke ukwuu, na-enye ha ohere ime nke ọma mkpọtụ mkpọsa ahịa ha n'ego ahụ.
Tags: zụta data emailemailadreesị ozi ịntanetịozi emailemail nkwaliterapaị